ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇန်နဝါရီလ 27, 2020
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်နှင့်အတူလူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်the New ရှီဗာ"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသင်သည်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။
Andriy Yarmolenko ဘဝ Story- အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ & မိသားစုနောက်ခံ, ပညာရေး & အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း buildup စောစောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသက်, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်မှလမ်း, etc ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ, မိသားစုဘဝ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်မြင့်တက်ကပါဝင်ပတ်သက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုအမှတ်ပေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုမျက်စိနဲ့ဘောလုံးသမားအဖြစ် Yarmolenko မြင်သည်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Andriy Yarmolenko ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
Andriy Yarmolenko Mykola Yarmolenko စိန့်ပီတာစဘတ်၏ရုရှားဆိပ်ကမ်းမြို့အတွက်, မိမိအမိ, Valentyna Yarmolenko နှင့်ဖခင်မှအောက်တိုဘာလ 23 ၏ 1989rd နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မှမွေးဖွားနှစ်ခုလေးတွေထဲကပထမဆုံးကလေးဖြစ်ပါသည် ပျော်ရွှင်တူသော မိဘများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ။
တစ်ဦးပြုံး mode မှာ Andriy Yarmolenko ရဲ့ဖေဖေနှင့်မေ။ IG မှအကြွေး
Andriy Yarmolenko ရဲ့မိဘနှစ်ယောက်စလုံးယူကရိန်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကစိန့်ပီတာစဘတ်၏ရုရှားမွို့၌ကသူတို့ကလေးတွေကိုရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ Andriy Yarmolenko ရဲ့မိသားစုအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ Kulykivka Raion, Chernihiv Oblast မြောက်ပိုင်းယူကရိန်းထံမှ၎င်းတို့၏ဇာစ်မြစ်ရှိသည်။ ယခုသူ၏မိဘများရုရှားပြောင်းရွှေ့ဘာဖြစ်လို့ရဲ့သင်ပြောပြကြကုန်အံ့။
သူ့မိဘအကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက် Andriy ရဲ့မိခင်စိန့်ပီတာစဘတ်၏ရုရှားဆိပ်ကမ်းမြို့တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတယ်။ သူမသည်ရုရှားတွင်အခြေချရန်ယူကရိန်းမှာသူမ၏အသစ်လက်ထပ်ခင်ပွန်းစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ Andriy ရုရှားတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်မကြာမီတွင်ပြီးနောက်, သူ့အဖေအပြည့်အဝကသူ့မိခင် join ဖို့ယူကရိန်းထံမှပြောင်းရွှေ့။
Andriy Yarmolenko ကျနော်တို့ကသူ့မိခင်ရုရှားတွင်သူမ၏အလုပ်အကိုင်ကိုကျေးဇူးတင်မိသားစု breadwinner ကြောင်းယူဆနိုင်တဲ့လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကြီးပြင်းလာတယ်။ နည်းနည်း Yarmolenko နေဆဲကောင်လေးတစ်ယောက်စဉ်ကိုယ်တော်သည်တစ်ချိန်ချိန်, သူ့မိဘများကသူတို့နေထိုင်ရာအပေါ်တစ်ဦးဦး-အလှည့်စေတော်မူ၏။ အချို့သောမသိသောအကြောင်းများကြောင့်မိသားစုအနည်းငယ်သာ Andriy Yarmolenko ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်တစ်ကြိမ် Chernihiv, မြောက်အမေရိက Ukiraine ၏မြို့ land- ပြန်သူတို့ရဲ့ဇာတိသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
ဘောလုံးပညာရေး Chernihiv, Yarmolenko ကြီးပြင်းခဲ့သည်ဘယ်မှာယူကရိန်းမွို့၌စတင်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကယူကရိန်းနှင့်အေစီမီလန်ဒဏ္ဍာရီ Andriy Shevchenko ဘောလုံးသမားလူတိုင်းငျကိုးကှယျခဲ့သညျ။ Yarmolenko သည်ထို့နောက် Dynamo ကိယက်ဗ်မြို့မှာမှတ်တမ်းများကစားခြင်းနှင့်ခြိုးဖောကျခဲ့သညျမှာအဘယ်သူသည်အဖြစ်သူ၏ရုပ်တုကိုများခြေရာအောက်ပါအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
Andriy Yarmolenko သည်သူ၏အစောပိုင်းကာလအတွင်းမှာ Shevchenko ငျကိုးကှယျ။ ခရက်ဒစ်မှ Radio Free ယူရိုပါလိဂ်
အနည်းငယ်ကောင်လေး, Andriy Yarmolenko အဖြစ် ကစားစရာအရုပ်များ၏နောက်ဆုံးပေါ် collection များကိုစိတ်ဝင်စား wasnt ။ သူလိုချင်အားလုံးသည်တစ်ဦးဘောလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ H ကိုငယ်ကောင်လေးကလှပတဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲသူ့ namesake အဖြစ်ဘောလုံးကွင်းဒဏ္ဍာရီ (Andriy) aving, ကသာကသဘာဝပါပဲ။
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, Yarmolenko ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်ဉာဏ်သည်မိမိလက်ကိုအပေါ်တစ်ဦးတက်တူးအဖြစ်ထားရှိမည်လျက်ရှိသည်။ အောက်တွင်တစ်ဦးသေနတ်ရထားမှာငေးနေတဲ့ဘောလုံးဂိုးနဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်သူ့ကိုပုံရသော Andriy Yarmolenko ရဲ့တက်တူးထိုးထားတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Andriy Yarmolenko ပညာရေးနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup ။ ခရက်ဒစ်မှ WTFoot
Yarmolenko ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူသွားသည့်ဘောလုံးဘောလုံးကိုယူမညျ့သူသည်သူငယ်၏ကြင်နာခဲ့သည်။ သူ့မိဘ, သူ၏အမှတ် overstepping အားမိမိစဉ်ဆက်မပြတ်ရှာပုံတော်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်သူလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ဦးတည်ခဲ့အများကြီးသံသယရှိဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးရုံးတင်စစ်ဆေးတက်သည်ကိုခေါ်လေသောအခါသူ၏မိဘများ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘောငျသိတယ်။
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
Yunist Chernihiv သူ့မြို့မှာရှိတဲ့ဒေသခံတစ်ဦးကလပ်ယခုနှစ် 2002 အတွက်သူတို့နှင့်အတူအောင်မြင်သောရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်၎င်း၏အကယ်ဒမီတန်းစီဇယားသို့ Yarmolenko လက်ခံခဲ့သည်။ သူ၏လမ်းအမည်ရသုံးခုကအခြားလူငယ်အသင်းများကိုစစ်တိုက်ကြ၏အောင်မြင်နိုင်အောင်စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ဦးကအလွန်ရည်မှန်းချက်ကြီး Yarmolenko; Desna Chernihiv, Lokomotyv နှင့် Vidradnyi ကိယက်ဗ်မြို့ 2002 မှ 2004 ၏အနှစ်အကြား။
ယခုနှစ် 2004 ခုနှစ်, Yarmolenko သူကြောင့်ယခင်ကလပ်ကနေလေ့ကျင့်ရေး၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များသည်းခံရ၏အားမိမိနိုင်ခြင်းအားမိမိလူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ကလပ် Chernihiv ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကမိမိအအကြီးတန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်အခြားကလပ် (Desna Chernihiv) မှရွေ့လျားမတိုင်မီပညာသင်နှစ်ရဲ့ထံမှသူ့ကိုဘွဲ့ရမြင်သောတစ်ဦးအပိုဆောင်း2ရာသီများအတွက် Yunist Chernihiv နှင့်အတူနေ၏။
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှလမ်း
Desna Chernihiv မှာနေစဉ်, ငယ်ရွယ် Andriy ဥရောပ၌သူ၏ဘောလုံးကစားခြင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ သူ့အဘို့, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ out- တစ်ဦးတည်းသာလမ်းရှိ၏ မိမိအ idol- Andriy Shevchenko ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါ။
ကြောင့် Dynamo ကိယက်ဗ်မြို့, Yarmolenko step-Down ရန်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Dynamo-2 ကိယက်ဗ်မြို့ named- ကလပ်ရဲ့လူငယ်အသင်းကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်လူနာနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်ထားရှိသည့်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီထက်-ဖိအားနှင့်အတူသူသည်ကလပ်ရဲ့အကြီးတန်းအဖွဲ့သို့သူ၏လမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
11 မေလ 2008 တွင် Dynamo အကြီးတန်းအဖွဲ့များအတွက်ဖြန့်ချိ၏ Yarmolenko အိပ်မက်လေ၏။ တစ်လက်ဝဲနှင့်ဗဟိုရှေ့ဆက်အဖြစ်အသုံးပြုနေစဉ်, သူ 99 ရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းဖို့အပေါ်သူ့ကို "ချစ်စနိုးခံရမြင်သောတစ်ဦး feat သွားလေ၏အသစ်က Andriy Shevchenko / နယူး Sheva"သတင်းစာဆရာများသည်။ Andriy Yarmolenko ဥက္ကာမြင့်တက်သူ့ကိုကလပ်များအတွက်အများအပြားဂုဏ်ထူးအနိုင်ရတဲ့ကိုမြင်တော်မူ၏။
Fame ပုံပြင်မှ Andriy Yarmolenko လမ်း။ ခရက်ဒစ်မှ FC အသင်း Dynamo ကိယက်ဗ် နှင့် IG
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
2017 မှာအဖြစ်တော်တော်များများထိပ်တန်းဥရောပကလပ်အသင်းကောင်းသောကောင်, ရိုက်ချက်နဲ့မြန်နှုန်းသူ့ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုမှကြယ်သောသူသည်ကျေးဇူးတင်စကားအပေါ်ဖိအားပေးလာတယ်။ ဒေါ့မွန်ကသူ့လက်မှတ်အဘို့မိမိတို့ဒူးထောက်တောင်းပန်ထိပ်တန်းကလပ်များ၏စာရင်းအကြားနိုင်ကြ။ ပါးစပ်-ရေလောင်းကမ်းလှမ်းမှုသူမဆီးတားနိုင်သည့်သညျ လာ. အဖြစ် Yarmolenko ရှည်လျားများအတွက်ကလပ်မှာမနေခဲ့ပေ။
အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်တွင် 11 ဇူလိုင်လ 2019, Yarmolenko မှလက်ရှိသူသည်မိမိအသင်းဖော်အတူကြောက်မက်ဖွယ်မိတ်ဖက်အထူးသဖြင့်မာ့ခ် Noble- သူရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းခွင့်မှတဆင့်လျှော့ချအဖြစ် 'passes နှငျ့အတူသူ့ကိုကျွေးမွေးသူကလပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိ Westham FC အသင်းမှာမိမိဘောလုံးအတော်ပင်။
Andriy Yarmolenko မာကု Nobile နှင့်အတူ westham ရဲ့အောင်ပွဲကျင်းပ။ ခရက်ဒစ်မှ ဒီသီချင်းလေး
ကိုယျတျောသသူ Ukranian ဒဏ္ဍာရီ Andriy Shevchenko အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားအထွဋ်ရောက်ရှိပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် Yarmolenko ဖြစ်ပါသည်, သံသယမရှိဘဲ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ယူကရိန်းထဲကလာကြပြီမှအံ့သြဖွယ်တိုက်စစ်ကစားသမားအဆုံးမဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - relationship ဘဝ
စကားကိုဝင်သကဲ့သို့၎င်း, အောင်မြင်တဲ့လူကိုနောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တိုင်းအောင်မြင်သောဘောလုံးသမားနောက်ကွယ်မှတစ်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေရည်းစားသို့မဟုတ်ဖျားခါအမှန်ပင်ရှိပါတယ်။ အောင်မြင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အတိုင်း Yarmolenko တစ်နှစ်တာယူကရိနျးပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားအနိုင်ရသည့်အခါတစ်နှစ် 2011, မေ့လျော့ခြင်းကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
ဤသည် Yarmolenko name- Inna အားဖြင့်သွားသောသူသည်သူ၏ထို့နောက်-ရည်းစားမှလက်ထပ်ယခုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… Yarmolenko ၏မယားနိုင်ငံခြားရေးရာအတွက်အထူးကုများနှင့်လည်းအဆိုပါအမေရိကန်ဒါနရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်ကိုသူမအသံနဲ့ကောင်းစွာပညာတတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
Andriy Yarmolenko ရဲ့ Wife- Inna Yarmolenko တွေ့ဆုံရန်။ IG မှအကြွေး
အတူတူ, ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးနှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့အမည်များကိုအိုင်ဗင်နှင့် Danylo အားဖြင့်သွားရသူနှစ်ဦးချစ်စရာသားတို့နှငျ့အတူမင်္ဂလာရှိပါတယ်။ အိုင်ဗင်အကြီးဆုံးသားကမေလ 22 ၏ 2013nd နေ့၌အဘယ်သူသည်မွေးဖွားခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တွင်သူတို့တစ်တွေပန်းခြံမှာအရည်အသွေးကိုအချိန်ပျော်မွေ့အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးသားတို့၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Andriy Yarmolenko နှစ်ခု sons- Danylo (လက်ဝဲ) နဲ့အိုင်ဗင် (ညာ) ရှိပါတယ်
မိဘတစ်ဦးအဖြစ်, Andriy Yarmolenko မိမိသားသမီးစဉ်ကသူ၏ဆက်ခံများအတွက်အခြေခံတင်သောရန်, မိမိကိုယျကိုဖို့တာဝန်ကပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ အချိန်ကိုကြွလာသောအခါသူ့ကိုအငြိမ်းစားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အဘို့အဒါဟာသူ့သားဖြစ်စေတဦးတည်းကတဆင့်သူ့အိပ်မက်နထေိုငျဆက်လက်ဤအရပ်မှလိုအပ်ကြောင်း, ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။
Andriy Yarmolenko သည်သူ၏ကုန်သွယ်မှုအောက်ပါအပေါ်မိမိသားကိုအိုင်ဗင်ကိုပုံသွင်း
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ဝေးပြဇာတ်များ၏အစေးအနေဖြင့် Andriy Yarmolenko ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသူ၏လူတစ်ဦး၏တစ်ဦးပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ယင်းအစေးကိုချွတ်, Yarmolenko အလွန်, ဖော်ရွေစားပြီး, လုံ့လရှိသူဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူသူ့ကိုဝန်းရံကြောင်းစွမ်းအင်အပေါငျးတို့သမျိုးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ ဘောလုံးကွင်းပြင်မှာထိုသူကိုသိသူပရိသတ်များကယ့်ကိုသူ့ကုမ္ပဏီကိုခံစားမယ်။
ပြဇာတ်ရဲ့အစေးပယ် Andriy Yarmolenko ကိုယ်ပိုင်ဘဝကသိရန်ရယူခြင်း။ IG မှအကြွေး
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုဘဝ
အစောပိုင်းအပေါ်, ကပိုကောင်းတဲ့လူနေမှုရှာရုရှားပြောင်းရွှေ့အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ Valentyna နှင့် Mykola သူတို့၏သားမှတဆင့်ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေးဆီသို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းအတုပါပြီ။
မိမိအ mum, နှင့်အဖေနှင့်အတူ Andriy Yarmolenko ။ IG မှအကြွေး
Andriy Yarmolenko ရဲ့အဖေ Mykola ကွာမီဒီယာကနေစောင့်ရှောက်နေစဉ်တွင်, တူညီတဲ့သူ၏ဇနီးနှင့်သမီး၏စကားမှန်သည်မဟုတ်။ အောက်တွင်သူမ၏သာသမီးနှင့်အတူကြည်လင်သောမိုးကောင်းကင်အောက်မှာ Valentyna ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Andriy Yarmolenko အမေနဲ့အစ်မ။ ချေးငွေများ: IG
မွေးနေ့အချိန်လေးဟာ Yarmolenko မိသားစုများအတွက်ပျော်ရွှင်အချိန်လေးဖြစ်ပါသည်။ အောက်က၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည် သူမ၏မွေးနေ့အပေါ်သူ၏ဆိတ်သငယ်ညီမနှင့်အတူယူကရိန်းရှေ့ဆက်။ မိမိအသာမှေးခငျြးအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်သေချာအောင်အားမိမိဆည်းကပ်သူအစေးတွင်ကိုထည့်လေ့မရှိသည့်ကတိကဝတ်ဆင်တူသည်။
Andriy Yarmolenko ညီအစ်မ။ IG မှအကြွေး
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - လူနေမှုပုံစံ
မိမိအလူမှုမီဒီယာလက်ကိုင်ကနေတရားစီရငျသောကြောင့် Andriy Yarmolenko တစ်ဦးမိုးရာသီနေ့အဘို့အချို့ပိုက်ဆံကယ်တင်မသူတစ်ဦးသည်ပညာရှိသောဘောလုံးသမားဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာသည်။ အဘယ်သူမျှမလေးလံအသုံးစရိတ်၏လက္ခဏာနှင့်တော်တော်လေးအထင်ကြီးကားများနှင့်အိမ်တော်လက်တဆုပ်စာအားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာအဖြစ်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလူနေမှုပုံစံစတဲ့အသကျရှငျရှိပါတယ်။
Andriy Yarmolenko လူနေမှုပုံစံ။ IG မှအကြွေး
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မရေမတွက်အချက်အလက်
အဆိုပါ Long-ကို run ရန်ငြိုးထားခြင်း: အောက်တိုဘာလ 2015 အတွက်ပွဲစဉ်များတွင် Andriy Yarmolenko နီးပါး Tara Stepanenko အမည်ရှိ Shakhtar Donetsk ပြိုင်ဘက်များ၏ခြေထောက်ချိုးဖဲ့သောအန္တရာယ်များတဲ့စိန်ခေါ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သော။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုဂိမ်းအပြီးတွင် ပြန်. နှင့်ဂျာစီလဲလှယ်, ဒါပေမယ့်သူ Dynamo ပရိတ်သတ်များကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနေစဉ်နောက်မှ, Yarmolenko မြေပြင်ပေါ်တွင် Stepanenko ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီပစ်ချ၏။ အဆိုပါ Shakhtar ကစားသမားသည်သူ၏တံဆိပ်ကိုနမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ရဲ့ 3-0 အနိုင်ရရှိစဉ်အတွင်း Dynamo ပရိသတ်တွေ၏ရှေ့မှောက်၌ကြမ်းတမ်းစွာကျင်းပပြီးနောက် ထပ်မံ. အခြားပွဲစဉ်အတွက် Yarmolenko Stepanenko ကန်။
၎င်းတို့၏ရန်ငြိုးထားခြင်းဟာအဖွဲ့များအကြားနှင့်တစ်ချိန်ချိန်တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရန်ပွဲမှဦးဆောင်တစ်ခုလုံးကို Ukranian အမျိုးသားရေးအသင်းစစ်မှာခဲ့လျှင်အဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် Ukranian ကစားသမား? ယူရို 2016 ၏အမြောက်အများ Dynamo နှင့် Shakhtar Donetsk ထံမှကစားသမားအပေါ်မှီခိုခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကစားသမားအနေဖြင့်စတင်ခဲ့သည့်အရှုပ်တော်ပုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံနှစ်ဦးစလုံးကစားသမားသူတို့ကိုယ်သူတို့မတိုင်မီပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ချပြီး, ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ခဲ့ရသည်အထိတိုင်းပြည်ယူရို 2016 စီစဉ်ထားနှောင့်အယှက်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
Andriy Yarmolenko နှင့် Tara Stepanenko ပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ထားခဲ့ရတယ်။ ခရက်ဒစ်မှ ဘီဘီစီ နှင့် Dailymail
ဂုဏ်ထူးသူ၏မရေမတွက်အရေအတွက်: ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျဒေါ့မွန်သို့မဟုတ် Westham ၌မိမိနေထိုင်စဉ်အတွင်း Yarmolenko ၏အသိပေးစာယူကြပြီပေလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့သိရပါဘူးဆိုတာပါပဲ; သူသည်မိမိဇာတိမြေအတွက်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသည်သူ၏အံ့သြဖွယ်ဂုဏ်ထူးအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဖြစ် Yarmolenko နှစ်ပေါင်းယေဘုယျအားဖြင့်ယူကရိန်းဘောလုံးလိဂ်နှင့်ယူကရိန်းဘောလုံးကြီးစိုး။
Andriy Yarmolenko မရေမတွက်သူ့အများအပြားဂုဏ်ထူး Facts- ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှအကြွေး
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Josip Ilicic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Krzysztof Piatek ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Arkadiusz Milik ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Aaron Connolly ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာသည့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Erling Braut Haaland ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Teemu Pukki ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Oleksandr Zinchenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Leroy စိတ်ကောင်းသောကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Kai Havertz ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Marco Reus ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Toby Alderweireld ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Thilo Kehrer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်